स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सार्वजनिक यातायात चल्ने ! – Nepal Japan
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सार्वजनिक यातायात चल्ने !
नेपाल जापान १३ असार १८:४६
कोरोना भाइरस संक्रमणका जोखिम कायमै रहेको भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन सकारात्मक रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकलाई अनिवार्यरूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूबीच बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । करिब दुई महिनाअघिदेखि सार्वजनिक यातायात थन्किँदा मजदुर र सवारी धनी मर्कामा परेको महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य बताउनुभयो ।
उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको पछिल्लो अवधि भोलि समाप्त हुने यस विषयमा तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृहसचिव र मुख्यसचिवसँग सल्लाह गरेर १३ गतेसम्म निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।